Ukubuyisela imali, yinhlama-sum yokukhokha wesikweletu ezijikelezayo kungenzeka?
トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Ukubuyisela imali, yinhlama-sum yokukhokha wesikweletu ezijikelezayo kungenzeka?
ezikhanyisayo credit, ngakolunye uhlangothi ne-lula ukukwazi ukusebenzisa kuphela ukukhokha ezihleliwe lemali nyangazonke imali, isikhathi kuze kuba-ke ukuqhubeka izinkokhelo ngisho nangemva kungenzeka kulandelwa isimo, ungase ngokwengqondo umthwalo kwandisa. Ngaphezu kwalokho, ngo-15% of the yonyaka lenzalo sisetshenziswa credit ezijikelezayo, kusukela ukuthi uyokhokha eningi isithakazelo njengoba isithakazelo njengoba isikhathi iyinde, inemiphumela eminingi kanye abantu bacabanga ukuthi ufuna imbuyiselo.
ukubuyiswa kwemali ngokuhlanganyela, nakuba isamba semali iyatholakala
buyiselo wesikweletu ezijikelezayo kuyindlela kokuqhutshwa ku nenkampani yakho yekhadi lesikweletu inkampani ngayinye ihlukile, itholakala yonke inkampani. Bobabili izinkampani, elihambisana ngendlela njengoba ngokuhlanganyela igama usebenzisa ikhadi ukucinga "ezikhanyisayo credit buyiselo" kuzovezwa. Ngo ukubuyiswa kwemali, kuyobe ngokuyisisekelo akhawunti ukudluliswa, futhi, uyokhokha ngesithakazelo kuhlanganisiwe.
kanye ayekade phindisela ngesikhathi, ukubukeza endlini esuka lapho, izosiza Ngokuzayo zokuphila. It is ngamunye inkampani ikhadi, ubelokhu emlungiselela ifasitela lo mbuzo, kuyoba inqubo ukuxhumana kukhona. Kusukela i-akhawunti oyisebenzisayo ukuze uthumele, kungaba manje ngokugcwele phindisela ngesimo intengo etholakalayo abuyiselwe ngaphambi kosuku lokuhoxa.
Ngaphezu othomathikhi ribonucleic buyiselo ngobuningi, kuye ngokuthi inkampani, ngokuzenzakalelayo lapho wenziwa udumo ezikhanyisayo ucacise futhi isicelo sekhadi, futhi kungaba ukushintshwa ku credit ezikhanyisayo kusukela ukubuyiswa kwemali ngokuhlanganyela, hhayi ngendlela efanayo Kukhona ikhadi ukuthi kuyinto.
Kulokhu is ezikhanyisayo credit kuqinisekisiwe, kuyoba kusuka lasebhange a inani elimisiwe ezikhanyisayo credit okokuqala, e inqubo ukukhokha bebonke ibhalansi ribonucleic wenziwa phambili esele. Kulokhu, ungakwazi imbuyiselo inqubo ekushintsheni yokukhokha wesikweletu ezijikelezayo.
ribonucleic Ngokwesibonelo, kukhona 15,000 yen izimangalo lawo makhadi, mkhawulo ribonucleic isethelwe 5000 yen Uma ukhona, futhi imali kwi-the ezikhanyisayo credit 5000 yen okokuqala futhi ukuqinisekisa credit ezikhanyisayo, yen 10,000, ibhalansi sife-phezu kukhona ngendlela ukubuyiswa kwemali. Mayelana 180 yen ku lasebhange kokuqala, kuzothatha isithakazelo yen mayelana 120 ngenyanga ezayo.
Ngaphezu kwalokho, ngemva uqinisekisa udumo ezikhanyisayo okokuqala, kukhona indlela imali yokudlulisa ukuba baphathe phambili esele ku-akhawunti eziqokiwe inkampani credit. Kulokhu, akashintshi inzalo sokuhoxisa kokuqala, lapho ukusikhokha, hhayi kuphela zizithanda kuze kube usuku. Dlulisa isithakazelo ilapha umthwalo.
Yiqiniso futhi ingenye izindlela
nezinye izinguquko, kukhona izindlela ukuthi kuyoba ukushintsha ezikhanyisayo credit Yiqiniso. Ngokwesibonelo, ukusetha izinkokhelo zenyanga 5,000 yen yebo, lapho kufika 20,000 yen izimangalo, ukhipha inkambo ezikhanyisayo credit. I mkhawulo udumo ezikhanyisayo isibe 100,000 yen kweziningi umhlinzeki. Kulokhu, Ukukhulisa mkhawulo kuya 20,000 yen, kuyoba ukubabuyisela ngokuzenzakalela batch.
Nokho, kusukela credit ezikhanyisayo kuhloselwe inzuzo ethatha zenzuzo inkampani ikhadi, kunzima ukushintsha okwesikhashana udumo ezikhanyisayo ngokuhamba abanandaba isamba semali ngaphandle kwenzalo. Ngo eziningi inkampani credit card, kuzothatha ngesimo imali yokudlulisa ngobuningi ngokuxhumana ngocingo. Kukhona ikhadi inkambo kwenziwa ngendlela khulula, esimweni lapha, ukubuyiswa kwemali kungenzeka uma ukubuyiswa kwemali ngesikhathi ezingase athishela izimali.